विश्वको त्यो शहर, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग छ हवाईजहाज ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
विश्वको त्यो शहर, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग छ हवाईजहाज !
तपाईले यो कुरा त सुन्नुभएको होला कि, कुनै शहरमा बस्ने अधिकांश मानिसको आफ्नो गाडी छ । तर तपाईले संसारमा एउटा त्यस्तो शहरको बारेमा सुन्नुभएको छैन होला, जहाँका हरेक मानिससँग हवाईजहाज छ । यति मात्रै होइन, यो शहरका मानिसहरु आफ्नो काममा जानका लागि आफ्नो एयरक्राफ्टको पनि प्रयोग गर्दछन् ।
यो सुन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्यो होला, तर यो सत्य हो । यो शहर अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको हो । यो शहरमा बस्ने अधिकांश मानिस पाइलट छन् । त्यसैले उनीहरुले आफूसँग प्लेन राख्नु सामान्य कुरा हो । यो बाहेक यो शहरमा डाक्टर, वकील आदि पनि छन् । तर उनीहरु पनि विमान राख्नमा सौखिन छन् ।
यो शहरमा बस्नेलाई हवाईजहाज राख्ने यति सौख छ कि, शनिवार सबै मानिस एकत्रित भएर लोकल एयरपोर्टमा जान्छन् । यो शहरमा प्लेनको मालिक हुनु भनेको अन्य शहरमा कारको मालिक हुनु जस्तै कुरा हो । त्यहाँ विमानलाई क्षति नपुगोस् भनेर सडकका संकेत र लेटरबक्सलाई केही माथि राखिएको छ । यो शहरमा सडकको नाम पनि विमानसँग जोडिएको छ ।
त्यहाँको रोडको नाम बोइङ रोड रहेको छ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले हवाई जहाजको परिचालनमा धेरै ध्यान दिएर अघि बढाएको छ । त्यसका लागि केही हवाई अड्डा पनि बनाएको छ । त्यहाँ पाइलटको संख्या १९९३ मा ३४ हजार थियो भने १९९६ मा ४० हजार भन्दा धेरै भए ।